အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပိန်ဆေးများ | | Colors Rainbow
April 25, 2018 June 28, 2018 admin 539 Views0Comments beauty, health, ဝိုင်	min read
မြန်မာစကားမှာ “ဝလို့ လှလို့” ဆိုပြီးသုံးနှုန်းကြတာရှိပါတယ်။ တစ်ချို့က ပိန်မှလှတယ်ဆိုပြီး ပိန်ချင်ကြ၊ တစ်ချို့က ဝမှ လှတယ်ဆိုပြီး ဝချင်ကြနဲ့ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကပြောရရင် လူတစ်ယောက်ဟာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အလေးချိန်အတိုင်းပဲ ကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အတွေ့ရများတာကတော့ ဝတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတဲ့သူတွေများလာတဲ့ တစ်ဖက်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အမျိုးမျိုးပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့ ရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲမှ ဝတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီး ဝိတ်ချကြပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း ဆေးဝါး၊ ဓာတ်စာ၊ Gym ဆော့တာတွေအပြင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာတွေပါ ရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အဝလွန်ခြင်းနဲ့ ပိန်ဆေး (အထူးသဖြင့် စျေးကွက်ထဲပေါများနေတဲ့ သောက်ဆေးတွေအကြောင်း) ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းတွေဟာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာအနှံမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သုံးဆလောက်တက်လာပါတယ်။ ၂၀၁၆ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ (၁.၉) သန်းရဲ့ လူကြီးပိုင်းတွေက ကိုယ်အလေးချိန်များနေပြီး (၁၃) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အဝလွန်နေကြပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းဆိုတာ ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးလို့ရတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းဆိုတာကို လွယ်လွယ်ပြောရရင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေလောက်အောင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အဆီတွေ အများအပြား စုပုံလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Body Mass Index (BMI) နဲ့ တိုင်းတာလေ့ ရှိပါတယ်။ BMI ဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် (kg) ကို အရပ် (m2) နဲ့စားပြီး ဖော်ပြတိုင်းတာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေလည်း ကိုယ့်ရဲ့ BMI ကို တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ WHO ရဲ့ Guidelines အရကတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်မှာ BMI သည် ၂၅ နှင့် ညီရင် သို့မဟုတ် ၂၅ ထက်များနေရင် ကိုယ်အလေးချိန် များ (Overweight) လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး BMI သည် ၃၀ နှင့် ညီရင် သို့မဟုတ် ၃၀ ထက် များနေပြီဆိုရင်တော့ အဝလွန်ခြင်းကို ညွှန်ပြနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
BMI တက်နေပြီဆိုရင်တော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း နှလုံးရောဂါ၊ အရိုးအကြောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါ (အထူးသဖြင့် အရိုးအဆစ်ယောက်ယမ်းခြင်း၊ ဆီးချို၊ ကင်ဆာရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ချေများသွားပါပြီ။
ဘာတွေက အဝလွန်ခြင်းကို ဖြစ်စေသလဲ
တကယ်တော့ အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာ အစားအစာတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြား အကြောင်းတရားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်
အစာ စားတာလည်း များမယ်။ စားတဲ့အစာတွေမှာ သကြား (အချို) ပါဝင်မှုများတယ်ဆိုရင် ကယ်လိုရီ တက်ပါတယ်။ အသင့်လုပ်ပြီးသား အချိုရည်တွေဟာ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားပါတယ်။ ခေတ်စနစ်အရ လူ့အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ အသင့်လုပ်ပြီးသား အစားအစာတွေ စားသုံးမှုနှုန်းဟာ မြင့်တက်ဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) လှုပ်ရှားမှုနည်းသော လူနေမှုပုံစံများ
ရုပ်မြင်သံကြား၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ အိမ်အလုပ်ကို ကူညီပေးတဲ့ အဝတ်လျှော်စက်များ၊ ပန်းကန်ဆေးစက်များ၊ အခြားသက်သာလွယ်ကူအောင် ကူညီပေးတဲ့စက်များဟာ လူတွေကို ပိုပိုပြီးတော့ လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေဆီ ဦးတည်စေပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုနည်းလေလေ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုဟာ နည်းလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အလုံအလောက် မအိပ်စက်ခြင်း
“အိပ်ရေးမဝရင် ဝတယ်” ဆိုပြီး အရပ်ထဲမှာ ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါအမှန်ပါပဲ။ သုတေသနတစ်ခုမှာ အိပ်ရေးဝဝ မအိပ်ရင် အဝလွန်နိုင်ချေကို နှစ်ဆတိုးစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သုတေသနကို Warwick တက္ကသိုလ်က ဆေးကျောင်းမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပါမောက္ခ Francesco Cappuccio ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ကလေးနဲ့လူကြီး အုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ကလေး ၂၈၀၀၀ ကျော်နဲ့ လူကြီး ၁၅၀၀၀ မှာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာတာကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ချိန်ပြောင်းလဲတာ၊ အိပ်ချိန် မလုံလောက်တာဟာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကိုဖြစ်စေပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို တိုးလာစေပါတယ်။ အိပ်ချိန်နည်းတာဟာ ခန္ခာကိုယ်တွင်းမှာ Leptin ထုတ်လုပ်မှုကို နည်းသွားစေပါတယ်။ Leptin ဟော်မုန်းဟာ အစာစားချင်စိတ်ကို တားဆီးတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ဟော်မုန်းစနစ်ပြဿနာရှိခြင်း (Lipid ဖြိုခွင်းမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း)
ဘာစီလိုနာတက္ကသိုလ်မှာ Dr Juan Carlos Laguna က ဖျော်ရည်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သကြားတစ်မျိုး (fructose) ဟာ Lipid ဖြိုခွင်းမှုကို ပြောင်းလဲစေပြီး အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနဲ့ တခြားဇီဝဖြိုခွင်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ Fructose ဆိုတာက သကြားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသည်းမှာ အဓိက ဇီဝဖြိုခွင်းမှု ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကုသရေးမှာအသုံးပြုသော ဆေးဝါးအချို့ဟာ ဝစေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ဆေးဝါးအပေါ် တုန့်ပြန်ပုံခြင်းမတူညီကြပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကိုတော့ (The Annals of Pharmacotherapy: Vol. 39, No. 12, pp. 2046-2054. DOI 10.1345/aph.1G33) ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ FTO Gene ကို သယ်ဆောင်ထားတဲ့ လူ (၆) ဦးမှာ (၁) ဦးက အစားအစာကို အရမ်းတပ်မက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လန်ဒန်ကောလိပ်မှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ သုတေသနအရ FTO Gene ကို သယ်ဆောင်သူတွေဟာ အစားကြူးကြောင်း Journal of Clinical Investigation (July 2013 issue) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပိန်ဆေးတွေဟာ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေအတွက် ကြေညာတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွဲဆောင်ရောင်းချနေကြတာကို အလွယ်တကူပဲ သိကြမှာပါ။ အွန်လိုင်းကနေ ကြော်ငြာပြီး ရောင်းချကြတာလည်း အများကြီးပါပဲ။ လိမ်းဆေးအနေနဲ့လည်း ရောင်းတာတွေရှိသလို သောက်ဆေးအနေနဲ့လည်း ရောင်းနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
တံဆိပ်အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ ပိန်ဆေးတွေဟာ တိကျရှင်းလင်းတဲ့ ညွှန်းပြချက်တွေမပါပဲ ဝယ်ယူသူတွေကို အမျိုးမျိုး ရောင်းချနေကြပါတယ်။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူတွေရဲ့ ညွှန်းပြမှုတွေမပါဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရောင်းကြ၊ ဝယ်ကြ၊ သောက်သုံးကြတဲ့အခါ ဒီဆေးတွေဟာ တကယ်ပဲ အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုအမျိုးအစားက ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာတွေကို မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘဲ အလွယ်တကူ သုံးစွဲမိတဲ့အခါ ထင်မှတ်မထားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် သောက်သုံးရတဲ့ ပိန်ဆေးအများစုက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဇီဝဖြိုခွင်းမှုနှုန်းကို မြန်ဆန်စေပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ကို တိုးစေပါတယ်။ အခြားဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ အခြားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်တဲ့ ဂဏှာမငြိမ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း၊ အရေပြားတွင် ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ တုန်ရီခြင်းနဲ့ ချွေးထွက်များခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိတဲ့ ကျန်းမာရေးစာစောင်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင် ပိန်ဆေးအများစုဟာ အန္တရာယ်မကင်းပါဘူး။ တချို့ဆေးဝါးတွေက အနည်းငယ် ထိရောက်တယ်လို့ ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- အစာစားချင်စိတ် နည်းသွားတာ၊ အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတာ သို့မဟုတ် ဇီဝဖြိုခွင်းမှုကို မြင့်တက်စေတာ။ ဒါပေမဲ့လည်း တကယ့်ကို နာမည်ကြီးတဲ့ ပိန်ဆေးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတာကြောင့် FDA က တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့တာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေအရ သွေးတိုးခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စအိုမှ သွေးယိုခြင်း ကျောက်ကပ်ပြဿနာများဖြစ်ခြင်းနဲ့ အသည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတွေ ဖြစ်စေလို့ ပိတ်ပင်ခဲ့တာပါ။
တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Ephedra ဆေးဟာ ၂၀၀၄ မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် Wed MD ရဲ့ လေ့လာမှုအရ Ephedra ဟာ ဓာတ်မတည့်မှု (၆၄) ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Hydroxycut ပါ။ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းနဲ့ တခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေလို့ ၂၀၀၉ မှာ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Fenfluramine ဆိုတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးဟာလည်း ဖြန့်ချိနေရင်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် အပိတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Meridia အမည်နဲ့ ဖြန့်ချိတဲ့ Sibutramine ဟာ ၂၀၁၀ မှာ နှလုံးနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင် စျေးကွက်ကနေ ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ National Institutes of Health ရဲ့ အဆိုအရ Sibutramine ဟာ အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းဖို့နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းစေဖို့ အသုံးပြုနေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပိန်ဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်တစ်ခုကတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သေချာစွာ မစစ်ဆေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက FDA တွေက ထုတ် လုပ်ဖြန့်ချိနေတဲ့ ပိန်ဆေးတွေဟာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းကို အတိအကျ မစစ်ဆေးနိုင်သလို ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာလည်း ဘေးကင်းကြောင်းကို အာမမခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောကြတာတွေတော့ မြန်မာနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံလေးတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စျေးကွက်မှာက တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေအတွက် မှောင်ခိုစျေးကွက်တွေက ရှိနှင့်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက နည်းပညာအပါအဝင် အခြားလိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးမို့ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီတော့ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေကနေ စျေးကွက်ထဲကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဆေးဝါးတွေက မှတ်ပုံမတင်ဘဲ နိုင်ငံတကာ Certificate တွေ ရပါတယ်ဆိုပြီး ရောင်းနေကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အစစ် လား အတုလားတော့ မသိပါ။ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေဟာလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ကုန်ပစ္စည်းမှာ အတိအကျ ဖော်ပြကြတာမဟုတ်တော့ အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ်။
Sibutramine ကတော့ ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် မသုံးသင့်ပါဘူး။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Rimonabant ဟာဆိုရင် US မှာ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာကိုဖြစ်စေတဲ့ Phenolphthalein တွေတောင် ရောင်းနေကြတာ တွေ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ FDA တွေမှာ ဒီပစ္စည်းတွေပါရင် မသုံးစွဲကြဖို့ သတိပေးထားပေမဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေထက် အန္တရာယ်များတဲ့ ပစ္စည်းအသစ်တွေဟာလည်း စျေးကွက်ထဲမှာ အမြဲတမ်းရှိနေတာမို့ ပိန်ချင်လို့ ဆေးသောက်မယ်ဆို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ သို့မဟုတ် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ သူနဲ့တိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
လူတွေက ပိန်ဆေးတွေကို ဘယ်လို လွဲမှားစွာ သုံးကြသလဲ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆေးခန်းမှာ၊ ကျွန်တော့်အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများဆုံး တွေ့ရလေ့ရှိတာက အစားလည်းမလျှော့ချင်ဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ လှတော့ လှချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ဆေးသောက်ပြီဆိုရင် ဒီလိုပုံစံတွေ အများဆုံး တွေ့ရပါတယ်။
– အကြံပေးတာထက်ပိုတဲ့ ပမာဏကို သောက်သုံးခြင်း၊
– လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံမှန်အလေးချိန်ကို ဝတယ်ထင်ပြီး သောက်သုံးခြင်း၊
– တတ်ကျွမ်းနားလည်သူရဲ့ ညွှန်ကြားမှုမပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊
– ဆေးအမျိုးအစား တစ်မျိုးတည်းမကဘဲ ပေါင်းစပ်သောက်သုံးခြင်း၊
– ဝမ်းနှုတ်ဆေး သို့မဟုတ် ဆီးဆေးများဖြင့် တွဲသောက်ခြင်း၊
– တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ တွဲသောက်ခြင်း (ဥပမာ – မူးယစ်ဆေးဝါး)၊
ပိန်ဆေးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတော့ သူ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို (၅) မျိုးလောက်တော့ ခွဲပြောလို့ရပါမယ်။
(၁) အစာစားချင်စိတ်ကို တားဆီးပေးခြင်း၊
(ပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ ငှက်စာပင်၊ ပန်းဝတ်မှုံ (Bee Pollen)၊ စမုန်စပါး မျိုးတွေ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။)
(၂) အစာ မစားဘဲ ဗိုက်ပြည့်နေသော ခံစားမှုမျိုးပေးခြင်း၊
(ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ Guar gum ပဲပင်တစ်မျိုး၊ Psyllium လို့ခေါ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့အပင်တစ်မျိုး ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။)
(၃) ဇီဝဖြိုခွင်းမှုကို မြင့်တက်စေခြင်း၊
(ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ Caffeine, Vitamins B – Complex, Guarana, Synephrine တို့ ဖြစ်ပါတယ်။)
(၄) အဆီထုတ်လုပ်မှုကို နှေးကွေးစေခြင်း၊
(လက်ဖက်စိမ်း၊ Hydrocitirc acid၊ Flax Seed တို့ ပါဝင်လေ့ရှိပါ တယ်။)
(၅) စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေထဲက အဆီစုပ်ယူမှုကို ထိန်းထားခြင်း၊
(Chondritin ပါလေ့ရှိပြီး များသောအားဖြင့် Glucosamine နဲ့တွဲပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။)
ပိန်ဆေးတွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိပါတယ်။ သောက်ဆေးမှာမှ ဆေးလုံးနဲ့ တချို့လည်း Capsules နဲ့လာပါတယ်။ အမှုန့်၊ အရည်၊ လက်ဖက်ရည်ပုံစံ၊ ကော်ဖီပုံစံတွေနဲ့ပါ ရှိပါတယ်။ တချို့ဆေးတွေက အစာနဲ့ တွဲသောက်ရလေ့ရှိပြီး တချို့ကတော့ အစာမစားဘဲ ဆေးကိုသာသောက်ရပါတယ်။ အဓိကပါတတ်တာက Dexatrim ပါ။ သူနဲ့အတူ ဇီဝဖြိုခွင်းမှုကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ Caffeine ဖြစ်ပါတယ်။ Caffeine ဟာ ဗဟိုအာရုံကြောကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီးအဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည် သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုတွေရဲ့ တစ်ဖက်မှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကလည်း အသင့်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်ထဲမှာ သုံးနှုန်းတဲ့ “ဓာတ်စာ” ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပိန်ချင်လို့ ဓာတ်စာသုံးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဓာတ်စာဆိုတာကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဖြည့်စွက်စာနဲ့ပုံစံတူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်စာတွေဟာ အစာမစားချင်အောင် လုပ်မယ်၊ အစာမစားဖြစ်တော့တဲ့အခါ တစ်ဖက်က လူတစ်ယောက် တစ်နေ့တာ လိုအပ်မယ့် အာဟာရကို ပြန်ဖြည့်မယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပုံမှန်စားနေတဲ့ အစားအစာတွေနေရာမှာ အစားထိုးအာဟာရနဲ့ ဆေးပင်တွေကို ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်ထည့်ထားပြီး အစားထိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်စာအား လုံးကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့ တစ်ခုတည်းကို ရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့တာ အာဟာရလိုအပ် ချက်ကို ပြည့်မှီအောင် မစားသုံးနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဓာတ်စာ သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်စာတွေမှာ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်များ၊ အသားဓာတ်၊ အင်ဇိုင်းများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ အပင်များမှရသော အစေ့များ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။
လူတွေကတော့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဓာတ်စာတွေကို သုံးစွဲကြတာပါပဲ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့၊ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အာဟာရတွေကို အစားထိုးဖို့၊ ကြွက်သားတစ်ရှုးတွေကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့၊ အမြင်အာရုံကောင်းစေဖို့နဲ့ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ဆိုပြီး သုံးစွဲကြပါတယ်။ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းကစပြီး (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းသော အမေရိကန်တွေဟာ ဓာတ်စာတွေကို စတင်သုံးစွဲကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်များပြားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်သူတွေအတွက် ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ အဆီနဲ့ အချိုလျော့စားခြင်း၊ အသီးအရွက်နဲ့ အသီးအနှံများကို စားသုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်မှာရောင်းချနေတဲ့ ပိန်ဆေးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ ပြောနေပေမဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ တိတိကျကျဖော်ပြထား၊ မထား မသေချာပါဘူး။ ဒါကြောင့် မို့ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အလှအပကို ဦးစားပေးပြီး ထင်ရာလျှောက်လုပ်တာထက် ဘေးကင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုသိပြီး လုပ်ဆောင်တာက ပိုပြီးကျန်းမာလှပပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဝလွန်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမှုတွေ စာဖတ်သူတွေဆီမှာ ရှိနေရင်း ပြောင်းလဲပြီး အန္တရာယ်များလှတဲ့ ပိန်ဆေးတွေကို သတိထားပြီး သုံးစွဲ နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
← အရေပြားနုပျိုမှုကို ပျက်ယွင်းစေမယ့် အစားအသောက်များ
Colors Rainbow နဲ့ LGBT မိသားစုများက ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်မှာ စတုဒီသာများလှူဒါန်းမည် →
အမျိုးသမီးများနှင့် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု